I-Asus Zenbook 14 - Ukubuyekezwa kwebhodlela elincane elinephunga elimnandi | Izindaba zamagajethi
I-Asus Zenbook 14 - Ukubuyekezwa kwebhodlela elincane elinephunga elimnandi
UMiguel Hernandez | | General, Izibuyekezo
I-Asus ingumkhiqizo osungulwe emakethe ye-laptop, yingakho sithanda ukukulethela ukuhlaziywa kwalolu hlobo lwehadiwe ngezikhathi ezithile, ukuze unqume ukuthi yiluphi olufanele izidingo zakho nezinto ozithandayo. Kulokhu sinezici ze- I-Asus Zenbook 14, ilaptop yakho konke ukuthanda, enobuntu obuningi nesikrini esikhulu.
Hlala nathi futhi uthole ukuhlaziywa kwe-Asus Zenbook 14 (UX433FN) enezibani nezithunzi zayo, ukubuyekeza ngokuningiliziwe ozokuthola kuze kube manje. Uma ucabanga ukuthola ilaptop, hlala phansi, ngoba kufanele sikhulume ngale divayisi.
Njengokuhlala, te Siyakhumbula ukuthi ungaya ngqo esigabeni esikuthanda kakhulu, kanye nephepha lobuchwepheshe, Uma, ngakolunye uhlangothi, ucacile, sikumema ukuthi ume lapha ukuze uyithenge ngqo ngentengo engcono kakhulu e-Amazon. Noma imiphi imibuzo engaqubuka ayicabangi ngayo bese uyishiya ebhokisini lokuphawula noma kuma-Social Networks ethu.
1 Idatasheet le-Asus Zenbook 14 (UX433FN)
2 Ukuxhumana kanye nemidiya eminingi: Isikrini esikhulu
3 Idizayini nezinto zokwakha: Zibukeka kahle futhi ziyaqonda
4 Ukuzimela kanye nesipiliyoni somsebenzisi
5 Umbono woMhleli
Idatasheet le-Asus Zenbook 14 (UX433FN)
Imininingwane ye-Asus Zenbook 14
I-Modelo I-Zenbook 14
Isistimu yokusebenza Windows 10 Ikhaya
Isikrini Amasentimitha angu-14 (35.6 cm) i-FullHD IPS LCD
Umseshi I-Intel i5-8265U - i3-8145U - i7-8565U
GPU I-UHD Graphics 620 noma i-NVIDIA GeForce MX150
RAM I-16 GB DDR4 SDRAM
Isitoreji sangaphakathi I-256 / 512GB PCIe x2 SSD
Izipikha I-Stereo 2.0
Ukuxhumana I-1x USB-C 3.1 - 1x i-USB-A 3.1 - 1X i-USBA 2.0 - i-1x i-HDMI - i-SD Tray - i-3.5mm Jack
Conectividad I-WiFi IEEE 802.11a / b / g / n / ac - iBluetooth 5.0
Ezinye izici Inzwa yezigxivizo zeminwe
Ibhetri 47 watt / ihora
Ubukhulu 323.5 x 211.85 x 15.9
Isisindo I-1.45 Kg
Ubona kanjani, Endabeni yale Asus Zenbook 4 sine-hardware ekhokhelwe kahle, ngaphezu kwesivumelwano esaziwayo phakathi kwama-processor kusuka ku-Intel's i3 kuya ku-i7 range, okuhambisana ne-NVIDIA ukuthuthukisa kancane ukusebenza kwehluzo. I-SSD efinyelela ku-512 GB ngaphandle kokungabaza isici esinikeza ubungqabavu obuningi, hhayi kulokhu, uma kungenjalo kuwo wonke ama-laptops. Kodwa-ke, lapho le Asus Zenbook 14 ingakhanya ngokubonakala kakhulu injalo nakwezinye izici.
Ukuxhumana kanye nemidiya eminingi: Isikrini esikhulu
Amehlo akho "aya" nakanjani kulelo phaneli langaphambili, futhi sinamafreyimu aphezulu angama-6,1mm, ahambisana no-2,9mm ezinhlangothini no-3,3mm ngezansi, lokhu kuholela kokuncane Iphaneli engaphambili engama-92% yesikrini se-LCD esinobuchwepheshe be-IPS (100% sRGB no-178º wombono) futhi lokho kunikeza isisombululo esijwayelekile se-FullHD. Uma kwenzeka unokungabaza, le Asus Zenbook 14 imelana nezimo zokukhanya ezimbi kakhulu futhi inephaneli elintofontofo kakhulu ongalisebenzisa yize linamasentimitha ayi-14 angajwayelekile. Iphaneli ivelele, yize ikhwalithi yokulinganiswa kwayo ingaba ngcono, okuthile okufanele kulungiswe ngesandla ngokunambitheka komthengi.
1 x USB 3.1 Gen 2 Uhlobo C ™ (kufika ku-10 Gbps)
1 x USB 3.1 Uhlobo A (kufika ku-10 Gbps)
1 x USB 2.0 Uhlobo A
I-1 x i-HDMI
1 x Isifundi sekhadi le-MicroSD
Ngomsindo siyathola Izipikha ze-stereo ziphinde zalungiswa ngu-harman / kardon, ifemu ehlonishwayo yomsindo. Zizwakala kakhulu, zizwakala kahle futhi zingaphezu kokwanele ukusetshenziswa kwansuku zonke, yize ngokwami ​​ngihlala ngibheja izikhulumi zangaphandle kuzo zonke izinhlobo zamakhompyutha.
Idizayini nezinto zokwakha: Zibukeka kahle futhi ziyaqonda
Lolu hlobo lwe-laptop lwenzelwe ukuhambisana nathi cishe noma yikuphi, yingakho u-Asus ethathe isinqumo sokubheja futhi ku-a umbala oluhlaza okwesibhakabhaka nethusi kuhlobo ebesilokhu siluhlola. Njengoba isihloko sisho, kuyikhompuyutha ephathekayo nenhle futhi enikezwa ngesiliva. Yonke eyenziwe ngepulasitiki, sinekhibhodi ekhanyisiwe futhi ukuhamba okuyisihluthulelo se-1,4mm nje okwenza kukhululeke kakhulu ukuthayipha okuningi.
Iphinde iqokomise ihenjisi yayo enelukuluku ebizwa ngokuthi I-ErgoLift, yi-laptop leyo ingalungiswa kuphaneli yayo kuze kufike ku-145º ephakamisa ikhibhodi kancane nge-3º, Ngikuthande kakhulu lokho ngoba ngingomunye walabo bantu abasebenzisa ikhibhodi engisebenza kuyo kanjalo. Ngokwethiyori lokhu kuthuthukisa ukukhiqizwa komsindo nokupholisa umsindo. Ukwenza lokhu, lapho ugoqa isikrini, ingxenye yaso engezansi ihlikihla ebusweni, asazi ukuthi lokhu kuzomelana kanjani nokuhamba kwesikhathi. Ngokombono wami kuwumqondo omuhle.
Ukuzimela kanye nesipiliyoni somsebenzisi
Isici sayo esigqame kakhulu yiphaneli yezinombolo "susa bese ubeka" esetshenziswayo ngokucindezela indawo ethile yephedi yokuthinta. Ngokwami, iphedi yokuthinta ibukeka ingcolile futhi incane, kepha kuyinkinga ejwayelekile yamadivayisi amaningi. Ngakolunye uhlangothi, kuyathakazelisa ukufaka lokhu okungenzeka ukuze unganikeli usayizi ohlangene noma induduzo ongayinikezwa ikhiphedi yezinombolo. Iqiniso lihlukile, njengoba isikhathi sihamba sisebenzisa iphedi yokuthinta njengekhibhodi akusewona umqondo omuhle futhi ugcina uthayipha izinombolo njengoba ubuyohlala wenza kwikhibhodi yendabuko, phezulu, ngoba awunayo leyo "mpendulo" evela ku okhiye. Ezingeni lokusebenza sithola i-laptop evikela kalula emisebenzini yehhovisi neyemihla ngemihla, okusobala ukuthi iyahluleka ngemidlalo ebanga kakhulu kepha lokho kusivumela ukuthi sidlale imidlalo embalwa eCities Skylines, ngokwesibonelo.
Ezingeni lokuzimela u-Asus uthi uyakwazi ukufinyelela emahoreni ali-13 wokusebenzisa, ulwazi lwethu beluhluke kakhulu, cishe amahora ayisithupha okusetshenziswa ngokulinganisela «ehloniphekile»Ingabe yilokho engikwazile ukukuthola, kusobala ukuthi uma siqala ukuphakamisa ukukhanya kwesikrini, sihlela izithombe noma amavidiyo futhi sixhuma izinto nge-USB-C, ukwehla kokuzimela.
Isilinganiso sezinkanyezi esingu-4
Ukubuyekezwa kwe: UMiguel Hernandez
Ukuthwala (usayizi / isisindo)
Iphaneli langaphambili elisetshenziswe kahle nokuklama okuhle
Kukhululeke kakhulu ukusebenzisa kodwa hhayi ukukhanya okungeziwe
Qamba kabusha ngephedi yokuthinta yenombolo nendawo yokuthayipha
Iphedi yokuthinta ingaba banzi
Letha kuqala iWindows Home
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Asus Zenbook 14 - Ukubuyekezwa kwebhodlela elincane elinephunga elimnandi
Ungayakha kanjani i-akhawunti ye-Skype
IMovistar + Lite: konke odinga ukukwazi